The Latest in Tech Sex - Rule News
The Latest in Tech Sex
Waxaad xakamayn kartaa wax kasta oo aad ka kululaynta si aad u sameynta jir dhiska la app ah, sidaas sababta aan bluetoosh noloshaada jinsiga?
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Wax waayo todobaadkan, sayidow? Ugu danbeeyay ee casriga ah galmada” waxaa qoray Robina Gibb, waayo theguardian.com on Saturday 23 January 2016 13.37 UTC
Qarni ganacsi maanta laga yaabo in aan ku abuurtay galmada, laakiin waxa ay abuurtay qalabka galmada Bluetooth-xiran.
Robina Gibb kariyana Los Angeles ee Sexual Health Expo ee January, sahaminta qaar ka mid ah qalabka ugu cusub iyo saaxiib suuqa ee, ka stimulators electronic lammaanaha in exercisers sagxada miskaha smartphone-gacanta.
The Piu siigaysiga toy
The gariiriye xun More. Sawir: Emily Berl for the Guardian
Made by IMTOY, this horyalka gariiriye nin ayaa bannaanka ah dhaldhalaalaan madow iyo casaan ah oo gudaha silicone cas a squidgy. Penises waxaa loola dhaqmi doonaa si doorasho ah 30 nidaamyada gariirka dhiibay saddex matoorrada kala duwan waxaa loogu talagalay in la siiyo "flutter balanbaalis qabow ama Navanti weyn", gemäß agaasimaha suuq Matthew Abo. Kharashka Piu $199, iyo syncs la app ah in iibiya xulashada ah filimada dadka waaweyn loogu talagalay in lagu ciyaaro waqti la app. Ay leedahay shirkad Chinese ku salaysan in Shenzen, Piu la calaamadeeyey gariiriye lab ugu raaxo leh oo casri ah.
The gariiriye Nova
The gariiriye Nova. Sawir: Emily Berl for the Guardian
Tori Parker, agaasimaha horumarinta ganacsiga ee waxaan-Vibe, muujinaysaa off shirkadda ee gariiriye cusub Nova. dabacsan A, gariiriye laba aflaha ah, ay u shaqayso la app waxaana-Control in sidoo kale kuu ogolaanayaa lammaane si loo xakameeyo qalabka fog. Tan waxaa loo yaqaan, in jir ah qaab galmo-casriga ah, sida "teledildonics". Tani waslad of casri play galmada fog leh idinkaa yeelan kartaa agagaarka $150.
Waxaan-Vibe ee lammaanaha gariiriye
edegga Waxaan-Vibe The. Sawir: Emily Berl for the Guardian
Waxaan-Vibe The 4 Plus yimaado la app Waxaan-Connect ah, oo waa version ugu dambeeyey smart waxa sheegtay in iibinta top "wearable" gariiriye lamaane ee dunida ee. Macmalay by shirkad Canadian Innovations Standard, qalooca ah, design ergonomic u muuqataa wax u eg qori caadiga ah caag fareeshka ah iyo waxaa loogu talagalay in la gashado by naagta marka galmada. Like Nova ah, waxaana-Vibe 4 la xakameyn karaa fog iyada oo loo marayo app, inkastoo shirkaddu sidoo kale soo jeedisay in helpfully ah "taam ku xirantaa" iyo "matoorrada Ruuxna-xasilloon" aad u fiican ee Solo a, Vibe panty digtoonaadaan. Waxaa la sameeyey sulub, silicone fasalka caafimaadka, ku yimaado pink, iyo guduud, iyo cawl iyo iibiyo, waayo, $179.
Ku soo dhawow California: labis of crystal dhigay
Crystal labis. Sawir: Emily Berl for the Guardian
Haddii kicinta internet-ku xiran aad wax arrin ma aha, laga yaabaa in aad jeceshahay Bir ah aayar safeeyey ama ukun ah crystal saafi ah ka sameeyey. aasaasaha Chakrubs Vanessa Cuccia bilaabay iyada shirkadda in la keeno awoodda bogsiinaya of crystal, ama sixir dhagax, in boqortooyadii reer galmada. Doorashooyinka waxaa ku jira Jade Indian, hooska cad iyo obsidian oo, sheegashada shirkadda, takhalusi doonaa user kasta oo tamar taban ee ay aura, iyo meel kasta oo kale ay u eekaan. Qiimaha dhaxayn $75 in $200.
Candy - monitor ee koronto ah kegels
exerciser Kegel Candy The. Sawir: Emily Berl for the Guardian
Candy waa IMTOY kale "Tababaraha shakhsiyeed" loogu talagalay haweenka si ay u xoojiyaan muruqyada sagxada miskaha. exercisers Kegel waa qaybta a dhacyaan iyo this "smart" kubada dhexroor 33mm yar on loop a waa mid ka mid ah eyadda. Ceebna-pink iyo silicone fasalka caafimaad dhigay, ay shidma cadaadiska gudaha ururiya "data xiisad" ka dhaq-daayo foosha ee muruqyada sagxada miskaha iyo isgaarsiin via Bluetooth si app casriga ah Candy, iyadoo qiyaasta cadaadis in sareeya at a 225. app waxay leedahay taxane ah "rabtay" la midab ah ee macallin gym dhiirigalinta. Baakadeeyey sidii sibraar qaali ah oo cadar, ay timaado in kiiska lagu kaydiyo ah oo quruxsan oo cad oo ka mid ah gudbiye ultraviolet ah jeermiska. Created by injineerada Chinese kii ayaa sheegay inay Seme 40dB dhawaaqa daarmayaay'e hooseeyo ee maktabad ay motor yar, kharashka Candy ah $189.
dildo The inseminating aad la raadinaya
The qalab POP Semenette. Sawir: Emily Berl for the Guardian
POP waa version ugu dambeeyay ee Semenette kacaan, toy galmo ah in laban sida qalab inseminating in sameeyay biyo bax ah. Hindisa Stephanie Berman ayaa ku guuldareysatay inay uuraystaan ​​iyada lammaanahaaga la isticmaalayo habka "turkey aagada" oo doonayay in la abuuro toy ah in uu ahaa labada farxi karo, functional iyo ma dareemaan sida gargaar caafimaad. Marka lamaanahaaga Berman ayaa uuraysatay markii ugu horeysay ay isticmaalaan, ayay xaqiijisatay maalgelinta iyo xiranayo wax soo saarka ee tubbada saari iyo badeli. Waxaa ku yimaado midabo kala duwan, ayaa doorasho suunka-on a iyo retails waayo, $139.95 oo ay ku jiraan saddex tuubooyinka fullaaci kara.
shaabuugyo Edgeplay ee. Sawir: Emily Berl for the Guardian
Edgeplay Gear hoos isku qabnay xulashadiisa of stock dhacdo Waxay ku, bandhigeen xulashada a suubban ee non-internet-ku xiran paddles qooraansaneynaa iyo shaabuugyo maqaar. Waayo, version xarigga of gags kubada, baqashada isdhawra iyo ironmongery inventive, ka eeg bogga internetka ee Edgeplay Gear.
34067	0 Qodobka, dhibaatooyinka bacriminta, Qalab, Nolosha iyo style, News, Robina Gibb, Sex, caafimaadka galmada, Technology, US news
← Huawei Mate 8 Review The Most Movies Rewatchable →